नारीको घरबार उजाड बनाउन नारीकै प्रयोग | Kendrabindu Nepal Online News
नारीको घरबार उजाड बनाउन नारीकै प्रयोग
२५ फाल्गुन २०७६, आईतवार १५:४१
नारी दिवस महिला जागरूकता सम्बन्धी दिवस हो । यो ८ मार्चमा विश्वभर मनाइन्छ । राजनीतिक तवरबाट सुरु भएको भएता पनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरण र समानता आदि सवालहरू अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका विषयहरू हुने गरेका छन् । यो सर्वप्रथम १९०९ फेब्रुअरी २८ मा मनाइएको थियो । १९१० मा महिलाहरूलाई मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यको साथ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्रदान गरिएको थियो । अहिले नेपालमा पनि नारी दिवस धूमधामका साथ मनाइने गरिएको छ ।
निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनुपर्ने मागबाट सुरु गरिएको यो दिवस अचेल समानताको लागि, समान हक र समान अधिकारको लागि भन्दै मनाउन सुरु गरिएको छ । त्यस बाहेक नारी दिवसमा अन्य मागहरू समेत समावेश हुँदै आइरहेका छन् । लैङ्गिक समानता, सम्पत्ति माथिको अधिकार लगायत अन्य कुराहरू समेत नारी दिवसको दिन गरिने भाषणहरूमा समावेश गर्न थालिएको छ ।
अझ भन्नुपर्दा चर्का भाषणहरूमा समेटिने मुख्य कुरा ‘घरायसी अन्याय सहन गर्न नहुने’, श्रीमान् श्रीमतीबीचको अधिकारको बाँडफाँड, श्रीमानले के गरेमा हिंसा हुने र श्रीमतीले कुन किसिमको प्रेम प्राप्त गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा समेत छलफल सुरु भएको छ ।
खासमा नारी अधिकार पनि फरक फरक किसिमले स्थापित हुने जस्तो देखिन्छ हाम्रो समाजमा । एक थरी नारी अधिकारकर्मीहरू पाँचतारे होटेलमा हाम्रा अधिकारको लागि भाषण गरिरहँदा यता वास्तविक जिन्दगीमा भने यौटी नारीको अधिकार खोस्न या यौटी महिलालाई समाजमा एक्लै बनाउन अर्की उस्तै महिलाको प्रयोग भइरहेको हुन्छ ।
पुरुषहरूले महिला चरित्रलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको आजबाट होइन । समाज विकासको क्रम सँगै महिलामा निहित रहेको मातृसत्ताको अधिकार पुरुषहरूले महिलाकै प्रयोग गरेर हत्याएका थिए । शारीरिक शक्ति र खुराफाती दिमागको प्रयोगबाट महिला महिला बीचमा द्वन्द्व सृजना गरी सम्पत्तिमाथि पुरुष अधिकार स्थापित गराइएको थियो । पुरुषको बहुविवाहको अधिकार पनि त्यति बेला नै स्थापित भएको हुनु पर्दछ । एक जना महिलालाई कमजोर बनाउन अर्की महिलाको प्रयोग त्यहीँबाट सुरु भएको हो र त्यो प्रचलन यद्यपि कायम छ ।
संस्कृतमा यौटा श्लोक छ ( युस्य पूज्यंते नार्यस्तु रमन्तेतत्र देवतास्’ यानि कि जहा नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवता रमाउँछन् । यहाँ नारीको पूजाको मतलब यथोचित सम्मान मात्र मानेर हेर्दा हुन्छ । अधिक सम्मानको खातिर गोडा नै ढोग्नु पर्ने या यज्ञ स्थापना गरेर पूजा नै गर्नुपर्ने भन्ने होइन तर जति कुरा एक जना महिलाले महिला हुनुको नाताले या आमा हुनुको नाताले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो हरण भयो भने पाप लाग्दछ, त्यहाँ देवता कसैगरी रमाउन सक्ने छैनन् भन्न खोजिएको हो ।
नारी अधिकार हनन गर्न नारीको प्रयोग कसरी हुन्छ ? केही उदाहरण हेरौं
श्रीमतीलाई थाहै नदिई उनले ती युवतीलाई बाबुआमासँग भेटाउँछन् । साथी सङ्गतीहरूसँग श्रीमतीको बारेमा नराम्रो कुरा गर्दै हिँड्छन् र ती युवती आफ्नो गर्लफ्रेन्ड भएको कुरा गौरव साथ सुनाउँदै हिँड्छन् ।
उदाहरण एक मध्यतराइ तिरका एक जोडी युवक युवती काठमाडौंमा बस्छन् । एक सन्तानसँग उनीहरूको जिन्दगी राम्रैसँग हाँसी खुसी बितिरहेको थियो । यत्तिकैमा उनीहरूको जिन्दगीमा अर्की युवतीको प्रवेश हुन्छ । घरमा झगडा सुरु हुन्छ । ती युवकले आफूले गरेको आम्दानी ती बाहिरकी युवतीलाई दिन थाल्छन् । कलह बढ्दै जान्छ । एक दिन अचानक श्रीमतीलाई थाहै नदिई उनले ती युवतीलाई बाबुआमासँग भेटाउँछन् । साथी सङ्गतीहरूसँग श्रीमतीको बारेमा नराम्रो कुरा गर्दै हिँड्छन् र ती युवती आफ्नो गर्लफ्रेन्ड भएको कुरा गौरव साथ सुनाउँदै हिँड्छन् ।
यता श्रीमती के गरौँ कता जाऊँ त्यो छोरीको जिम्मेवारी कसरी बहन गरौँ भनेर न्याय माग्दै भौतारिदै हिँडिरहेकी छन् । यहाँ हुँदाखाँदाको अर्काको घरबार बिगार्न आएकी युवतीले एक पटक सोच्न सम्म सोचिनन् कि मेरो कारणले म जस्तै अर्की युवतीको घरबार उजाडिएको छ, जिन्दगी बरबाद भएको छ भनेर । यहाँ ती युवती आफूजस्तै अर्की युवतीको घरबार बिगार्न प्रयोग भएको थाहै पाइनन् । आफ्नो खुसीको लागि यसरी महिलाले नै महिला लाई बरबाद पारेका घटना कति छन् कति हाम्रो समाजमा ।
उदाहरण दुई गरिबी र अन्य समस्याबाट आक्रान्त भएपछि पर्वत कुस्मा बजार नजिकैका एक जोडी श्रीमान् श्रीमतीले विदेश गई केही उपार्जन गर्ने निर्णय गर्छन् । दुर्भाग्यको कुरा श्रीमान् स्वास्थ्य चेक जाँचमा अनुत्तीर्ण हुन्छन् र विदेश जान पाउदैनन । विदेश नगई कुनै हालतमा जिन्दगीमा सुधार न आउने निर्क्योल गरेर श्रीमती विदेश जान अगाडि सर्छिन् । श्रीमती इजरायलमा कार्यरत रहँदै गर्दा दुई सन्तानका बाबुले नेपालमा अर्की महिला बिहे गरेर बस्छन् । जसको लागि ती महिला विदेश गएकी थिइन् उसलेनै धोका दिएको थियो तर यहाँ पनि एक महिला नै प्रयोग हुन पुगिन ।
उदाहरण तीन राजधानी नजिकैका एक जोडी काठमाडौँमा डेरा गरी बस्दथे । बुहारी कामकाजी भएको सासूलाई पटक्कै मन परेको थिएन । काम गर्न गएकी बुहारीको बिरुद्द ती सासूले छोरालाई यति सम्म भड्काउने काम गरिन कि उनीहरूबीच घमासान झगडा हुन थाल्यो । बुहारी जागिर छोड्न नसक्ने । सासूले कुनै हालतमा काम गर्न नदिने, अब बुहारीलाई निस्तेज पार्न सासूले नै छोराको जिन्दगीमा अर्की नातेदार युवतीको प्रवेश गराइन् । अन्तिममा अवस्था कस्तो भयो भने उनीहरू सम्बन्ध–विच्छेद गर्ने अवस्थामा पुगे । सम्बन्ध–विच्छेद लगत्तै ती युवकले ती युवतीसँग बिहे पनि गरे । यसरी घर परिवार भित्रैका महिलाले आफू जस्तै अर्की महिला लाई अन्याय गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् ।
यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । समाजमा अझै विकराल घटनाहरू देख्न सकिन्छ । सामान्य स्वास्थ्य समस्याको कारण, सामान्य आनीबानीको कारण, दाइजो वा सम्पत्तिको कारण कुनै महिलाले सौता बेहोर्नु अचम्मको विषय हुँदै होइन ।
समाजमा यस्ता कैयन उदाहरणहरू भेट्न सकिन्छ कि सङ्घर्ष गर्दै गरेकी एक जना महिलाको घरबार अर्की महिलाको कारण उजाडिएको हुन्छ । कहिले महिला आफै गतिलो भविष्यको खोजी गर्दै गर्दा अरूको भविष्यसँग खेलबाड गरिरहेका हुन्छन् भने कति ठाउँमा एउटी महिला्लाई कमजोर बनाउन र एक नारीमाथि थिचोमिचो गर्न अर्की महिलाको प्रयोग पुरुषहरूले जानाजानी गरेका हुन्छन् । जहिले सम्म एक नारीको अपमान गर्न, एउटी महिलालाई हेला गर्न र एक महिलाको अधिकार खोस्नको लागि अर्की महिला प्रयोग भइरहन्छिन तबसम्म महिला अधिकार र समानताको कुरा गर्नु व्यर्थ छ ।
कहिले महिला आफै गतिलो भविष्यको खोजी गर्दै गर्दा अरूको भविष्यसँग खेलबाड गरिरहेका हुन्छन् भने कति ठाउँमा एउटी महिला्लाई कमजोर बनाउन र एक नारीमाथि थिचोमिचो गर्न अर्की महिलाको प्रयोग पुरुषहरूले जानाजानी गरेका हुन्छन् ।
महिला अधिकारका कुरा भाषणमा रमाइला लाग्छन् तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न निकै कठिन छ । जबसम्म एक महिलाले आफू जस्तै अर्की महिलाको मर्म बुझ्न सक्ने चेतनाको विकास हुँदैन तबसम्म यो पुरुषप्रधान समाजले महिलाको अपमान गर्न र महिला अधिकार हनन गर्न महिलाको प्रयोग गरिरहनेछ । अब आम महिलाहरू सचेत हुनु पर्दछ । आफूबाट कुनै आफूजस्तै अर्की महिला पीडित भएकी त छैनन् ? मनमनै यो प्रश्नको जवाफ आफैले खोज्नु पर्दछ र यदि त्यसो भएको छ भने सुधार आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ ।
तमाम महिलाहरूमा नारी दिवसको शुभकामना ।
Prevकोरोनाको कारण ‘म यस्तो गीत गाउँछु-२’ को प्रदर्शन स्थगित
होलीमा लोला हान्ने र रङ दल्ने काम नगर्न गृह मन्त्रालयको अनुरोधNext